Indawo Yokuphakela Iintyantyambo... okuthetha Ukukwamkela Ekhaya - I-Airbnb
Indawo Yokuphakela Iintyantyambo... okuthetha Ukukwamkela Ekhaya
Igumbi lakho lokulala e indlu eyenziwe ngomhlaba sinombuki zindwendwe onguKeith Ann
UKeith Ann yi-Superhost
Ndihlala kulwahlulo oluhle kakhulu, indawo ekhuselekileyo kunye nosapho olunobuhlobo. Ikhaya lam yindlu enebali elinye. Ungayimisa imoto yakho phambi kwendlu kumphezulu omnyama ngasekhohlo kwendlela yeenyawo.. ujonge iveranda!
Ngelixa ndihlala kwikhaya lam, endihlala kulo, ndiza kufumaneka, kodwa ndiya kuhlonipha indawo yakho kunye nemfihlo. Ndiyakuthanda ukuthetha kunye nokudibana nabantu abatsha.
Ibhedi enye yobukhulu bokumkanikazi, idesika kunye nendawo yegunjana. Igumbi lokuhlambela elihle kakhulu labucala elineshawa. Ubungakanani befriji efanelekileyo kwigumbi lokulala ukuze uyisebenzise.
4.99 · Izimvo eziyi-337
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi337
Imephu AYIFANELEKILEYO indawo yendlu yam inyuka induli kwaye ihlala ekunene kwi-Village Drive! I-Rirwalk ine-Kroger, i-T.J.MAXX, kunye neendawo zokutyela ezininzi. I-Dunbar nayo ine-Kroger kunye neendawo zokutyela ezidumileyo! ICorridor G apho uninzi lweevenkile kunye neendawo zokutyela ezidumileyo zikhoyo. Iimayile ezi-8 okanye imizuzu engama-20 ukuya kwiYunivesithi yaseCharleston. Iimayile ezi-1.6 okanye imizuzu emi-6 ukuya kwisibhedlele saseThomas. Iimayile ezi-2.2 ukuya eShawnee Sports Complex eDunbar, eSalango Way. Idolophu yaseCharleston yimizuzu eli-15 yokuqhuba
Umbuki zindwendwe ngu- Keith Ann
Ndiza kufumaneka ukuba ndikubulise kwaye ndiphendule nayiphi na imibuzo. Kodwa uya kuba nemfihlo yakho.